UNgqongqoshe Wezangaphandle kanye Nezifunda Zenhlangano Yezizwe (iSafron) kanye neNarcotic Control Shehryar Afridi babe nomhlangano noNdunankulu u-Imran Khan ngoMsombuluko ukudingida lesi simo ngemuva kokukhishwa kukaRana Sanaullah.
Bobabili babambe umhlangano lapho bekhulume khona ngokuqhubeka kwecala eliphathelene noMongameli wePaksitan Muslim League-NAwaz (PML-N) uMengameli wasePunjab oboshelwe icala lokushushumbisa izidakamizwa. UShehryar Afridi ubuye waxoxa nezindaba zenkonzo yakhe noPM Imran.
NgoDisemba 26, uMengameli wasePakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) uPunjab wakhululwa eNkantolo YeLahore's Camp Jail ngemuva kokuthi iNkantolo eNkulu yaseLahore (LHC) imnikeze ibheyili ecaleni le-narcotic.
URana Sanaullah wamukelwa ngezigxobo kanye nesihlambi sezilwane kanti abasebenzi be-PML-N baphinde bajaha iziqubulo lapho ededelwa.
Umholi we-PML-N waboshwa ngamacala athinta ukushushumbisa izidakamizwa, wadedelwa ngemuva kwezinyanga ezinhlanu nezinsuku ezingama-25. Izibopho zakhe zokuqinisekisa ukuthi zithunyelwe ku-LHC ngemuva kokuthi kukhishwe uRobkar egameni lomphathi wejele.
Ngakusasa kokukhululwa, inqwaba yezishoshovu ze-PML-N, kubandakanya unkosikazi kaRana Sanaullah nomkhwenyana wakhe, bafika ngaphandle kwejele ngobumbano. Kodwa-ke, wahamba nomndeni wakhe ngaphandle kokukhuluma nabezindaba.
U-PM Imran uSehryar Afridi uxoxa ngodaba lukaRana Sanaullah kulandela ukukhishwa kwakhe